Waad ku mahadsan tahay booqashada mareegta WorkSourceOregon.org (degelka). Markaad gasho bogga, waxaad u aqbashay shuruudahaan iyo xaaladahaan si xaddidaad la'aan ah.
Iyadoo aan la xaddidin mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha soo sheegnay, tusmada ku jirta degelka ayaa loo bixiyaa “sida ay tahay” iyo iyadoo aan la qaadeyn damaanad nooc kasta ha ahaadee, cad ama maldahan, oo ay ku jiraan damaanad-qaadyada cad ee beecmushtarka iyo ku habboonaanta ujeeddo gaar ah ama ku xadgudub la’aan. Waxaad oggolaatay inaad si aadan waxyeello iyo magdhow khasaare u qabsan doonin WorkSource Oregon iyo wakaaladaheeda iyo saraakiisheeda iyo waxyeello kasta oo ku salaysan adeegsiga waxyaabaha ku jira boogan.
Xiriiriyeyaasha degellada kale - afeef
Degelkani wuxuu bixiyaa xiriirada mareegaha kale si loogu sahlo macaamiishayada. Kuwaan waxaa ka mid ah xiriiriyeyaasha mareegaha ee ay maareeyaan hay'adaha kale ee dawladda, urrurada samafalka iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Markaad isticmaasho mid ka mid ah xiriiriyeyaashaan, kuma jiraysid mareegtan oo Ogeysiiskan Qarsoodiga ah lama dabaqi doono. Markaad tagto degel kale, waxaad ku qasban tahay siyaasadda asturnaanta ee boggaas.
Markaad raacdo xiriiriye ku geynayo degelladaan midkoodna WorkSource Oregon, ama hay'ad, sarkaal, ama shaqaale kasta oo ka tirsan WorkSource Oregon ma dammaanad-qaadayaan saxnaanta, isku halaynta ama waqtiga saxda ah ee xog kasta oo ay daabaceen boggagan qalaad, mana ayidayaan tusmada, aragtiyo, badeeco , ama adeegyo kasta oo ku xiran nidaamyadaan, loomana qabsan karo wixii khasaare ah ee ka dhasha ku tiirsanaanta saxnaanta, isku halaynta ama waqtiga xogtooda. Qaybo ka mid ah macluumaadkaas ayaa laga yaabaa inay khaldan yihiin ama aysan ahayn kuwo hadda jira. Qof kasta ama hay'ad kasta oo ku tiirsan macluumaad kasta oo laga helo nidaamyadaan waxay sidaas u sameeyaan halis isaga ama iyada u gooni ah.
Macluumaadka la uruuriyey markaad daalacato boggaga mareegeed ee gobolka
Haddii aad daalacato ama soo dejisato macluumaad inta aad booqaneyso mareegtan, waxaan uruurinaa oo keydinaa keliya xogta caadiga ah ee ay soo uruuriyeen dhammaan softiweerada adeegaha mareegta. Macluumaadkaasi waa:
Lambarka Xiriirka Internet (IP) ee loo isticmaalo xiriirintaada (balse ma ahan cinwaankaaga iimaylka). Lambarka IP-ga waa aqoonsi tiro ah oo lagu garto bixiyaha adeeggaaga internet-ka ama si toos ah kumbuyuutarkaaga. Waxaan u isticmaalnaa cinwaanka IP-ga inaan ka jawaabno codsiga il-mariskaaga. Tusaale: 122.125.36.42
Cinwaanka mareegta ee loo qoondeeyay Lambarkaaga Xiriirka Internet-ka (hadduu jiro mid). Tusaale: somename.com
Nooca il-mariska iyo nidaamka nidaamka hawlgal ee la adeegsado. Tusaale: Mozilla/4.0 (ku habboon; MSIE 4.01; Windows NT; IE4WDUS-1998101501)
Taariikhda iyo waqtiga aad booqatay degelkan
Bogagga mareegeed ama adeegyada aad ka heshay degelkan
Mareegta aad booqatay kahor imaatinka degelkan. (Xusuuso: tani ayaa lagu daray si falanqayn kooban loogu sameeyo sida booqdayaashu u yimaadaan degelkayaga, tusaale ahaan mashiinka raadinta, xiriiriyaha degel kale, iwm.)
Ma raadraacno xulashooyinka gelis ee isticmaale gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sookoobnaa macluumaadka kor ku qoran si loo go'aamiyo:
Urruradee adeegsadeyaasha ugu badan ah (shayga 2 ee kore) si ay si fiican ugu beegsadaan tusmada loogu talagalay dhagaysteyaasha
Waa maxay il-marisyada loo isticmaalo degelladayada si loo go'aamiyo farsamooyinka ay tahay inaan isticmaalno si aan u sameyno boggag la shaqeyn doona il-marisyada kala duwan (shayga 3 ee kore).
Intee jeer ayaa boggagayaga la booqdaa (shayga 5 ee kore)
Ka raadinta badan magacyada ururka mashiinada raadinta ee dadka u jiheeya degelka (shayga 6 ee kore)
Wixii ujeeddooyinka amniga degelka ah iyo si loo hubiyo in adeeggan ay heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha, degelkan wuxuu la socon karaa cidda soo gasho shabakadda si loo aqoonsado isku dayga aan la oggolayn ee gelinta ama beddelidda macluumaadka, ama haddii kale waxyeellada geysata. Haddii la socoshada amni ay muujiso caddayn xadgudub ama fal dambiyeed, hawlwadeenada nidaamka ayaa siin kara natiijada kormeerkaas saraakiisha ku habboon. Marka laga reebo baaritaannada fulinta sharci ee la oggolyahay, wax isku day ah lama sameeyo si loo garto shaqsiga isticmaalaya ama caadooyinkooda adeegsi. Isku-dayada aan la oggolayn ee gelinta macluumaadka ama beddelka macluumaadka ku saabsan adeeggan si adag ayaa loo mamnuucay waxaana laga yaabaa in lagu muto ciqaab sharciyeed sida ku cad sharciga gobolka iyo qaanuunnada federaalka, oo ay ku jiraan Xeerka Khayaanada iyo Xad-gudubka Kumbuyuutareed 1986 iyo Xeerka Ilaalinta Kaabeyaasha Macluumaadka Qaranka ee 1996.
Dhammaan macluumaadka ku jira boggan waa diiwaan guud haddii uusan jirin ka dhafid ku jira sharciga. Cutubka ORS 192 wuxuu ka kooban yahay Sharciga Diiwaanka Dadweynaha Oregon.
Gobolka Oregon, waxaa jira sharciyo xaqiijinaya in dawladdu furan tahay iyo in dadweynuhu xaq u leeyihiin inay helaan diiwaannada habboon iyo macluumaadka ay ka hayaan dawlad goboleedyada. Isla mar ahaantaana, waxaa jira waxyaabo ka reeban xuquuqda guud ee helitaanka diiwaannada dadweynaha iyadoo ku saleysan asturnaanta shaqsiyaadka. Sharciyada gobolka iyo federaalka labaduba waxay bixiyaan ka-reebitaano. Waxaa laga yaabaa inaan kaa codsano macluumaadka lagu aqoonsan karo shaqsiga si aan u bixino adeegyada la codsaday, balse macluumaadka noocaas ah waxaa loo maareeyaa si ay u noqoto booqasho weji-ka-weji ah oo kale oo lagu tago xafiiska dawladda.
Macluumaadka shaqsiyeed iyo shaacin la'aanta
“Macluumaadka Shakhsiyeed” waa macluumaad ku saabsan kaasoo si sahlan loogu aqoosan karo qofkaas, sida magaca qofka, cinwaanka iyo lambarka telefoonka. Macluumaadka shaqsiyeed ee noocan oo kale ah ayaa laga dhaafi karaa shaacin haddii shaacintu ay ka dhigan tahay ku xadgub asturnaan oo aan macquul ahayn marka ay jiraan duruufo. Cinwaanka mareegta ama Lambarka Xiriirka Internet-ka (IP) looma tixgeliyo macluumaad shaqsiyeed. Inta badan macluumaadka ay ururiso dawlad goboleedka waxaa loo qataa inay u furan yihiin dadweynaha haddii aan si gaar ah looga reebin. Cutubka ORS 192 wuxuu ka kooban yahay Sharciga Diiwaanka Dadweynaha Oregon. Sida uu dhigayo sharcigan, shaqsiyaadka waxaa loo oggolyahay inay codsadaan in mas'uuliyiinta dawladda aysan shaacin karin diiwaan guud oo ay ku jiraan cinwaannada guriga iyo lambarrada telefoonka duruuf kasta ha jirtee. ORS 192.445 ayaa qeexaya sida loo codsado shaacin la'aanta.
Dhammaan macluumaadka laga soo ururiyey degelkan waxay noqonayaan diiwaan guud ilaa laga ka-dhaafid sharci ay jirto. Cutubka ORS 192 wuxuu ka kooban yahay Sharciga Diiwaanka Dadweynaha Oregon.
Ka eeg qeybta shaacinta dadweynaha ee kore wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan asturnaanta iimaylka.
Codsashada kormeerka macluumaadka shaqsiyeed
Waxaad xaq u leedahay inaad dib-u-eegto macluumaadka uu kaa uruuriyay ee degelkan. La xiriir hay'adda bixisa adeegga aad codsatay.
Degelkan wuxuu isticmaalaa Shahaadada Sugista Daalacashada (SSL) ee softiweerka lambarada u bedello xogta si loo helo gudbinta xog sugan. URL-ka ku jira il-mariskaaga wuxuu isku beddeli doonaa "HTTPS" halkuu ka ahaan lahaa "HTTP" marka astaantanta amniga la codsadosado. Il-mariskaagu waxa kale oo laga yaabaa inuu muujiyo quful ama astaan fure ah xariiqda hawsha si uu u muujiyo gudbinta sugan ee la codsaday. Haddii tilmaamayaashan aan la helin, macluumaadka ayaa laga yaabaa inuu u nugul yahay dhexda inay kala baxaan dhinacyo kale. Inta badan wadaxiriirka iimaylka looma tixgeliyo inuu sugan yahay. Haddii aad gudbineyso macluumaad xasaasi ah, tixgeli inaad ku dirto boostada ama aad kala xiriirto hay'adda telefoon.
Kukiyada waa fayl qoraal yar oo uu sameeyo saafarka mareegta oo lagu kaydiyo kumbuyuutarkaaga. Kukiyada waxay keydiyaan macluumaad gaar ah oo saafarka mareegta uu heli karo inta aad daalacanayso mareegta. Caadi ahaan, kukiyada ayaa keydiya macluumaadka sida dookhyadaada degeleed, taariikhda ugu dambeysay ee aad eegtay bog gaar ah, ama lambar aan kala sooc lahayn oo loo adeegsado in lagu aqoonsado gelidaada gaarka ah ee shabakadda. Kukiyada ayaa naga caawiya inaan cabbirno inta booqde ee soo gala mareegtayada iyo inta booqdeyaashan ka midka ah ee cusub ama soo noqday.
Kukiyada ay geliyeen kumbuyuutarkaaga aaladahayaga maareynta shabakada ayaa u qoran si ay isticmaali karaan oo keliya aaladaha shabakadayada, waxayna kaliya heli karaan macluumaad gaar ah. Ma uruurino macluumaad, faylal kale oo kukiyada ah, ama ma helno macluumaad kasta oo ku jira kumbuyuutarkaaga.
Inta badan il-marisyada mareegta waxay kuu oggolaadaan inaad diido ama aqbasho sifooyinka kukiyada (tixraac faahfaahinta qeybta caawinta ee il-mariskaaga). Waxaad xakameyn kartaa isticmaalka kukiyada kumbuyuutarkaaga, xitaa waad tirtiri kartaa. Si kastaba ha ahaatee, diidista isticmaalka kukiga ayaa laga yaabaa inay carqaladeyso shaqeynta qaar ka mid ah adeegyada mareegta WorkSource Oregon.
WorkSource Oregon waxay ka mamnuucdaa xayaysiisyada hay'adaha gaarka loo leeyahay in lagu sameeyo mareegaheeda. WorkSource Oregon ma ayido mana kafaala-qaado badeecadaha, adeegyada ama macluumaadka ka muuqda mareegaha gaarka loo leeyahay.